१० सर्वश्रेष्ठ iTunes विकल्प तपाईं २०२० मा प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ - सफ्टवेयर
२०२० मा १० सर्वश्रेष्ठ आइट्यून्स विकल्पहरू
आईट्यून्ससंग पक्कै पनि संगीत, टिभी, चलचित्रहरू, आदि पहुँच गर्नका लागि सफ्टवेयर हुनुपर्दछ। तपाई संगीत डाउनलोड गर्न वा सुन्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईको आईफोनको जगेडा सिर्जना गर्नुहोस्, वा तपाईको आईओएस उपकरण प्रबन्ध गर्न चाहानुहुन्छ, तपाई यसलाई केवल आईट्यून्स प्रयोग गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि धेरै आईओएस प्रयोगकर्ताहरूले आईट्यून्स विकल्प खोज्न थालेका छन् एप्पलले आइट्युनहरू फ्यास गर्न सुरू गरिसकेका छन।
सबैभन्दा नयाँ र भर्खरको म्याकोस क्याटालिना अद्यावधिकको साथ, आइट्यून्सलाई तीन फरक अनुप्रयोगहरू (पोडकास्ट, एप्पल संगीत, र एप्पल टिभी) मा विभाजन गरिएको छ, प्रत्येक अनुप्रयोग एक विशिष्ट प्रयोगको लागि हो। यी अनुप्रयोगहरूले सबै डेटा व्यवस्थापन गर्दछ जुन आईट्यून्सद्वारा ह्यान्डल गरिएको थियो।
नि: शुल्क नेटफ्लिक्स खाताहरू - उत्पन्न गर्नका लागि उत्तम तरिकाहरू
नेटफ्लिक्सको लागि Best उत्तम VPN
किन आईओएस प्रयोगकर्ताहरू आइट्यून्स वैकल्पिक सफ्टवेयर खोज्दैछन्?
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन्। हामीले तल केहि पोइन्टहरू सूचीबद्ध गरेका छौं।
केहि कार्यहरू प्राप्त गर्न जुन आईओएस उपकरणको साथ सीधै प्राप्त गर्न सकिदैन।
तिनीहरूको डाटामा सिधा पहुँच प्राप्त गर्न।
आईओएस वा आईओएस ब्याकअपको साथ मुद्दाहरूको छुटकारा पाउन।
सर्वश्रेष्ठ आइट्यून्स विकल्पहरूको सूची:
१ WALTR २
वाल्टर २ म्याक र विन्डोजको लागि निःशुल्क परीक्षणको लागि उपलब्ध छन्। तपाईंले पूर्ण संस्करण प्रयोग गर्न यसको खरीद गर्नु आवश्यक छ, यद्यपि यो सस्तो छैन। तर, सफ्टवेयर आईट्यून्सको लागि एक उत्तम विकल्प हो। तपाईं आफ्नो फोन एक केबल वा वाइफाइ मार्फत जडान गर्न सक्नुहुन्छ। यसले सेकेन्ड भित्र तस्विर र संगीत ट्रान्सफर गर्न सक्दछ (केवल जसरी तपाईं एयरड्रोप मार्फत ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ।) यसले सबै प्रकारका फाईलहरूलाई समर्थन गर्दछ। त्यसो भए, WALTR2तपाईले दिनु भएको प्रत्येक पैसाको लायक छ।
२. म्याकएक्स मिडियाट्रान्स
म्याक्सएक्स मिडियाट्रान्स आईट्यून्सको लागि अर्को विकल्प हो, जुन आईओएस उपकरणहरू बीच डाटा ट्रान्सफर गर्न र ब्याक अप गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो म्याक वा कुनै आईओएस उपकरणहरूबाट संगीत, भिडियोहरू, र चलचित्रहरू स्थानान्तरणको लागि उपयोगी हुन सक्छ। यदि आईट्यून्ससँग तपाईंसँग आवश्यक भएको सबै छैन भने, यो तपाईंको लागि उपयोगी हुन सक्छ। तपाईं यस सफ्टवेयरको माध्यमबाट रिंगटोनहरू पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। साथै, तपाईं ईन्क्रिप्शन मार्फत आफ्नो मिडिया सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ।
MusicBee पनि एक अद्भुत संगीत प्लेयर र संगीत प्रबन्धक हुन सक्छ। योसँग धेरै उन्नत सुविधाहरू र सेटि filesहरू छन् संगीत फाईलहरू प्रबन्ध गर्न र प्ले गर्न।
MusicBee का सुविधाहरू:
MusicBee को थिम परिवर्तनयोग्य छ। त्यसो भए तपाईले यसलाई आफ्नो मनपर्ने र इच्छा अनुसार परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँ संगीतको गुणस्तर वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं सजिलैसँग सबै संगीत फाईलहरू iTunes बाट MusicBee मा केहि मिनेटमा आयात गर्न सक्नुहुनेछ।
योसँग १ quality-ब्यान्डको इक्वेलाइजर छ ध्वनि गुणस्तर समायोजन गर्न।
Dear. डियरमब आईफोन प्रबन्धक
डियरमब आईफोन प्रबन्धक सबै एक सफ्टवेयरमा छन्। तपाईं यो सफ्टवेयरलाई संगीत फाईलहरू, भिडियोहरू, तपाईंको उपकरणको लागि ब्याकअप सिर्जना गर्न, वा केहि पनि केहि चीजको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सफ्टवेयरको हेराई एकदम सरल र प्रयोग गर्न सजिलो छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुनै समस्या बिना सफ्टवेयर प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ।
डियरमोब आईफोन प्रबन्धकका सुविधाहरू:
यसमा रिच अडियो व्यवस्थापन सेवा रहेको छ।
सफ्टवेयर भित्र यसको धेरै कम्प्रेसन उपकरणहरू छन्।
तपाईं यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ वा केही क्लिकहरूमा तपाईंको उपकरणको ब्याकअप गर्न।
यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सजिलैसँग सुरक्षा सुविधाहरूको साथ फाइलहरू आयात र निर्यात गर्न मद्दत गर्दछ।
यदि तपाईं समान सुविधाहरू र कन्फिगरेसनको साथ एक साधारण आईट्यून्स विकल्पको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, Anytrans तपाईंको लागि सफ्टवेयर हो।
Anytrans भुक्तान गरियो। तपाईं आफ्नो आइपडबाट म्याक / पीसीमा संगीत हस्तान्तरण गर्न नि: शुल्क संस्करण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं ब्राउज गर्न, सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ, एन्ट्रान्सका साथ फाईलहरू ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ।
योसँग सरल इन्टरफेस छ।
MediaMonkey उन्नत उपकरणहरूको साथ iTunes को लागी एक उत्तम विकल्प हो। यो मिडिया प्रबन्धन को सबै उपकरणहरु संग आवाश्यक हुन्छ कि तपाईले आइट्यून्स प्रयोग गरेर पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ।
MediaMonkey का सुविधाहरू:
डुप्लिकेट फाइलहरू हटाउन यो उपयोगी छ।
यो मिडिया iOS र अन्य उपकरणहरूमा सजिलैसँग सि media्क गर्न मद्दत गर्दछ।
यसले MP3, M4A, WMA, FLAC, र अधिक धेरै सहित धेरै अडियो स्वरूपहरू समर्थन गर्दछ।
तपाईं डिजाइन र दुबै अडियो र भिडियो को आफ्नो प्लेलिस्ट अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ।
यो दुबै भुक्तान र नि: शुल्क संस्करण छ।
नाम जाने बित्तिकै SynciOS iOS उपकरणहरूमा फाईलहरू र डेटा सिncing्क गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो सफ्टवेयरसँग अद्भुत प्रबन्धन उपकरण र सेटिंग्स छन्, जसले यसलाई आइट्युनको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि उत्तम बनाउँदछ।
SynciOS को सुविधाहरु:
यसले मिडिया ट्रान्सफर दुबै तरीकाले समर्थन गर्दछ।
यसले प्रयोगकर्तालाई सबै फोन फाइलहरू जगेडा गर्न र ईबुकहरू, संगीत, भिडियो, छविहरू, रिंगटोन र अन्य धेरै आईओएस वा अन्य उपकरणहरूमा सिnc्क फाईलहरू सक्षम गर्दछ।
यो सबै सुविधाहरू पहुँच गर्न पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ।
SynciOS ले प्रयोगकर्तालाई उपकरणहरू र अन्य विकल्पहरू सजिलो तरिकामा प्रयोग गर्न दिन्छ। यो पनि एक अभिनव तरीकामा संगीत व्यवस्थापन को लागी तपाइँको बाटो बदल्छ।
यहाँ अर्को सफ्टवेयर छ जुन आईट्यून्सको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सुविधाहरूको ठूलो समूहको साथ आउँदछ।
DoubleTwist का सुविधाहरू:
यो यसको अत्यधिक मिल्दो संस्करणको साथ मिडिया व्यवस्थापनको लागि धेरै उपयोगी छ।
तपाइँ तपाइँको संगीत प्लेलिस्टहरू यसलाई आइट्युनबाट धेरै छिटो र सजिलो सि sy्क गर्न सक्नुहुन्छ।
यसले उपयोगकर्तालाई क्लाउड सेवाहरू जस्तै ड्रपबक्स, वनड्राइभ, र गुगल ड्राईव मार्फत संगीत पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ।
9. Dr.fone स्थानान्तरण
Dr.fone Transfer अर्को iTunes वैकल्पिक हो जुन IOS र म्याक उपकरणहरूबाट मिडिया र अन्य डाटा आईट्यून्स बिना पीसीमा स्थानान्तरण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Dr.fone स्थानान्तरण को सुविधाहरु:
यसले उपयोगकर्तालाई आईओएस उपकरणबाट सबै डाटा पीसीमा ब्याकअप गर्न र नयाँ आईफोन वा आईप्याड वा कुनै आईओएस उपकरण सेटअप गर्न अर्को एप्पल उपकरणमा स्थानान्तरण गर्न दिन्छ।
यसलाई कुनै पनि डाटा ट्रान्सफरको लागि आईट्यून्स आवश्यक पर्दैन।
यो अत्यधिक उपयुक्त सफ्टवेयर हो।
फिडेलिया एक संगीत प्रबन्धकको साथ साथै आइट्यून्सको लागि एक अद्भुत विकल्प हो। यो विभिन्न अडियो र भिडियो ढाँचा समायोजन र अनुकूलन को लागी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
FLAC अडियो प्रारूप समर्थन गर्दछ।
योसँग सजीलो र गुणस्तर रूपान्तरणको लागि आईजोटोप टेक्नोलोजी छ।
यो मिडिया स्वरूप को अनुकूलन को विभिन्न प्रकार को लागी एक सरल ईन्टरफेस छ।
यो राम्रोसँग हेडफोन भर्चुअलाइजेशनको साथ चित्रित छ जुन प्रयोगकर्तालाई एक अद्भुत अनुभव दिन्छ।
आइट्यून्स कहिलेकाँही यसको नयाँ अपडेटहरू आउँदछन् जसको लागि तपाईंलाई प्राय जसो आईट्यून्स स्टोरको भ्रमण गर्नुपर्दछ जुन कहिलेकाँहि अप्ठ्यारो हुन सक्छ। साथै, हामी सबैको सिद्ध मिडिया प्रबन्धकको लागि हाम्रो दिमागमा बिभिन्न आवश्यकताहरू हुन्छन्।
मैले माथि सूचीबद्ध गरेको आईट्यून्स वैकल्पिक सफ्टवेयर धेरै उपयोगी हुन सक्छ र आइट्यून्सको ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। चाहे तपाईं संगीत, चित्र, भिडियो, वा अन्य आईसीएस उपकरणबाट तपाईंको पीसी / म्याकमा अन्य फाईलहरू स्थानान्तरण गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं सूचीबद्ध सफ्टवेयरको कुनै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं यसलाई प्रयोगको लागि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र भविष्यमा यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई उपयुक्त लाग्छ र तपाईंको सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ भने।
के तपाइँ क्रोमबुकमा रोब्लक्स डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ?
स्कूलमा नि: शुल्कका लागि मिनीक्राफ्ट
केहि डाउनलोड नगरीकन नयाँ नयाँ फिल्महरू अनलाइन हेर्नुहोस्
स्कूल गुगल साइटहरूमा संगीत अनब्लक गरियो
कहाँ रोबलोक्स प्रोमो कोड प्रविष्ट गर्ने
म्याकमा नेटफ्लिक्स शोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्